အစွန်းရောက်ပိုင်ဆိုင်မှုမှစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းမှသင်ခန်းစာ ၁၂ ခု Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 13, 2016 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 13, 2016 Douglas Karr
ကြီးစွာသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများစွာ၏ဟန်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လုံလောက်သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ရေရှည်မဟာဗျူဟာများမရှိပါက ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အားထုတ်မှုတစ်ခုအမှတ်တံဆိပ်ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်နှေးကွေးပြီးအလွန်အမင်းဝေဖန်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများသည်တစ်ခုအားတားဆီးနိုင်သည်။ အလယ်အလတ်တစ်နေရာရာတွင်အောင်မြင်မှုသည်အဖွဲ့အစည်း၏ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များကိုဆက်လက်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သော်လည်းရလဒ်များကိုပုံဖော်သည့်အခါအချိန်နှင့်တပြေးညီလမ်းညွှန်နှင့်မဟာဗျူဟာကိုပြောင်းလဲနိုင်သောအရင်းအမြစ်များရှိခြင်း။
ငါစာဖတ်ခြင်းကိုလက်စသတ် အစွန်းရောက်ပိုင်ဆိုင်မှု - အမေရိကန်ရေတပ် SEALs များမည်သို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြသနည်း။ ၎င်းသည်စစ်မြေပြင်ပေါ်ရှိသင်ခန်းစာများနှင့်နေ့စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြိုးပမ်းမှုများတွင်မည်သို့အသုံးချနိုင်ကြောင်းများစွာဖတ်ရှုရသည်။ ရေတပ်ဝါရင့်အနေနဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးမထားဘူးလို့ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ငါသင်ယူခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့သူတို့စီးပွားရေးအပေါ်မှာဘယ်လိုသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးသဘောမတူနိုင်ခဲ့ပါ။
ပန်းတိုင် - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ သင်၏ကုမ္ပဏီ၊ လူများနှင့်သင်၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုသူတို့မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုနားလည်သည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုစီအတွက်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်နှင့်အဆုံးသတ်အခြေအနေကိုဖော်ထုတ်ဖော်ပြပါ။
အရင်းအမြစ်များ - မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတစ်ခုစီအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အချိန်နှင့်ဘဏ္budgetာငွေ၊
စီစဉ် - စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းတစ်ခုစီမှကျွမ်းကျင်သူများအားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်စွမ်းရည်။
ရွေးချယ်ရေး - အကောင်းဆုံးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများကိုဆုံးဖြတ်ပါ အရိုးရှင်းဆုံး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများနှင့်သူတို့အကျိုးသက်ရောက်မှုအများဆုံးရှိမည့်အရင်းအမြစ်များကိုအာရုံစိုက်ခြင်း။
လုပ်ပိုင်ခွင့် - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများသည်ရွေးချယ်ထားသောလမ်းကြောင်းအတွက်အစီအစဉ်နှင့် ၄ င်းတို့တွင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောဗျူဟာများချမှတ်ရန်။
ဆက်ပြောပါတယ် - စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏အဆင့်တစ်ခုစီမှတဆင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်အစီအစဉ်ဆွဲပါ။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါရလဒ်များကိုဘယ်လိုအမြင့်ဆုံးရနိုင်မလဲ။ အမှုအရာမှားယွင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖြစ်စဉ်ကိုကဘာလဲ?
အန္တရာယ်များ - တတ်နိုင်သမျှထိန်းချုပ်နိုင်သောအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်။ လိုက်နာမှုကိုသေချာစေရန်လျှောက်ထားနိုင်သောစည်းမျဉ်း၊ အယ်ဒီတာ့အာဘော်နှင့်ခွင့်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်များရှိပါသလား။
ကိုယ်စားလှယ် - လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုသင်ရပ်တည်နိုင်ပြီး ဦး ဆောင်မှုပြုနိုင်ချိန်တွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်သူများကိုအစီအစဉ်၏အချို့သောအပိုင်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်။ တိုက်ဆိုင်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုရန်သင်၏အလုပ်ဖြစ်သည်။
စောငျ့ရှောကျ - ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်သေချာစေရန်ထွန်းသစ်စသတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အစီအစဉ်ကိုအစဉ်အမြဲစစ်ဆေးပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါ။
အကျဉ်းချုပ် - စီမံချက်ကိုပါ ၀ င်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုဆက်သွယ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအလေးပေးခြင်း။
မေးမြန်း - မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတစ်ခုချင်းစီ၏ရှုထောင့်များနှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိစေရန်မေးခွန်းများမေးပါ။
ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း - စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုပြီးဆုံးသွားသောအခါသင်ကြားသောသင်ခန်းစာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကကျွန်တော်ဟာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းအတွင်းရှိသူတွေကိုစစ်မြေပြင်မှာတွေ့ရတဲ့တူညီတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအသုံးချဖို့စကားလုံးများစွာပြောင်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်တိုင်းမှစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသို့ ဦး တည်သွားသောသတင်းများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချခြင်း၊ ထိထိရောက်ရောက်ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်သင်ခန်းစာများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းစသည်တို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။
သတိမပြုမိဘဲမသွားသင့်သည့်မမြင်ရသောအဆင့်ဆင့်လည်းရှိသည်။ အကယ်၍ ဤအရာသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနနှင့်ဘတ်ဂျက်ကိုစီမံခန့်ခွဲသည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတိုင်းသည်အဖွဲ့အစည်း၏ပန်းတိုင်များနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများမှမလုပ်သည့်အလုပ်မည်မျှလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်သည် တန်း။ တား အဖွဲ့အစည်းအတွက်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးနှင့်အတူ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏အဓိကအချက်ကိုမကူညီလျှင် - ၎င်းကိုမလုပ်ပါနှင့်!
Tags: အစွန်းရောက်ပိုင်ဆိုင်မှုJocko WillinkLeif Babinစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာအုပ်များရေတပ်ဖျံစာဖတ်ခြင်းဖတ်ဖျံ